Indlela yokufumana izaziso ezivela kwisiteshi sakho osithandayo Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ukuba ujonga iqonga elilungileyo lokubukela iividiyo kwi-intanethi emva koko unokujonga ukhetho lwe-YouTube. Yenye yezona zinto zigqibeleleyo nezisebenzayo onokufikelela kuzo namhlanje. Enye yezinto zayo ezinomdla kukuba iqonga elifanayo liyakwazisa xa umntu efake ividiyo entsha.
Ukuba ufuna ukufumana isaziso xa umntu epapashe ividiyo eqongeni, kuya kufuneka Rhuma kwisiteshi sakhe kuqala. Kwinqaku elilandelayo siza kukufundisa eyona ndlela ilula neyona ilula yokufumana izaziso ezivela kwisitishi sakho osithandayo kuYouTube.
Bhalisa ukuze ufumane izaziso
Ngaba ufuna iYouTube ikwazise xa ijelo lilayishe ividiyo entsha eqongeni? Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukubhalisela kweso sitishi. Le nkqubo ilula, kwaye ukuba awazi ukuba ungayenza njani, siyakumema ukuba ulandele ezi ngcebiso zilandelayo ngenyathelo ngenyathelo:
Khangela umjelokazi ufuna ukubhalisa
Cofa kwindibhalise"kwaye ilungile
Kukhawuleze kwaye kulula ukuba ungarhuma kwinani lezitishi ozifunayo ngaphakathi kweqonga leYouTube. Unokhetho lokuyenza ukusuka kwisicelo esiselfowuni okanye ukuba ukhetha kwikhompyuter. Nanga amanyathelo okurhuma kwisitishi esivela kwinguqulelo yedesktop:
Ukufikelela kwiphepha elisemthethweni le-Youtube
Dlala ividiyo yejelo ofuna ukulirhumela
Apha ngezantsi kwevidiyo uyakufumana i icon ebomvu enegama elithi "ndibhalise”. Cofa apho kwaye ugqibile.
Fumana izaziso zeevidiyo ezintsha kwi-YouTube
Ukuseta iakhawunti yethu yeYouTube ukufumana izaziso ngeevidiyo ezintsha kulula. Kuya kufuneka siye kwisiteshi esifuna ukufumana izaziso kuso kwaye siqiniseke ukuba sibhalisile kuso. Kuya kuba nzima ukwenza izaziso ngaphandle kokubhaliselwa ngaphambili kwijelo.
Yenza izaziso zisebenze kwikhompyuter
Abasebenzisi banokukhetha sebenzisa izaziso kwinguqulelo yedesktop yeYouTube. Ukulungiselela le nto, kubalulekile ukuvula isikhangeli kunye nokufikelela kwiphepha elisemthethweni leqonga lokusasaza ividiyo. Emva koko kuya kufuneka ulandele la manyathelo alula:
Intloko kwisitishi esivela apho ufuna ukufumana khona izaziso
I icon enegama "Rhuma”. Oko kuthetha ukuba sele ubhalisile kwelo jelo kwaye sinokuqhubeka nenkqubo.
I icon emile okweentsimbi ibonakala ecaleni kwe icon "ebhalisiweyo". Cofa kuyo kwaye ukhethe ukhetho "Konke"
Ngoku lonke ixesha ijelo lilayisha ividiyo entsha uya kufumana isaziso ukuba uye kuyibona.
Yenza izaziso zivela kwi-app
Ngaba izaziso zesitayile zingenziwa zisebenze kwisicelo? Impendulo nguewe. Apha sixelela amanyathelo oza kuwalandela:
Vula usetyenziso lweYouTube
Ukufikelela kwisitishi ofuna ukufumana izaziso kuso
Cofa kwi icon ekwimo ye intsimbi
Khetha ukhethoKonke"kwaye ilungile
1 Bhalisa ukuze ufumane izaziso
2 Fumana izaziso zeevidiyo ezintsha kwi-YouTube
3 Yenza izaziso zisebenze kwikhompyuter
4 Yenza izaziso zivela kwi-app